Isiqalo emva kokususwa kwebala lokuzalwa
Uninzi lwe-moles luyingozi, kwaye ezinye ziyazinyuka zodwa. Kodwa ngamanye amaxesha oogqirha, ngokuvuma komthengi, banqume ukususa uphawu lokuzalwa. Ukususwa kwe-Laser ye-moles ayishiyi izibazi kunye namacwecwe. Ukusebenzisa i-laser, amanqaku okuzalwa omdaka kunye obomvu asuswe ngempumelelo. Oku kuyinyani ngakumbi xa i-moles ibonakala kakuhle kwaye ingabonakali.
I-Moles, njengenye iindawo ezinengxaki kwesikhumba (ikakhulukazi ebusweni nasentanyeni) ingaba nzima ukuba ubomi, ngakumbi kubafazi. Ukususa uphawu lokuzalwa aluyinkqubo elula, ngoko ke xa unqumle malunga nokusebenza kwaye wenze isinqumo esicacisiweyo, qhagamshelana nomdematologist.
Nangona ukusetyenziswa kokususa i-markmark yokuzalwa kungekho nto ikhokelela kwiinkathazo, kwiimeko ezinqabileyo, isiqabana sihlala emva kokususwa kwayo.
Ngethamsanqa, unokuthatha amanyathelo ambalwa ukunciphisa ukubonakala okanye ukususa ngokupheleleyo ezi ziko.
Iingcebiso ezifanelekileyo zokususa izibazi
Faka isicelo kwindawo apho i-mole, i-cream, i-ointment okanye i-gel echasene nezikhenkce isuswe. Izicwenga ezahlukeneyo ezivela kwinqaku ezishiywe emva kokususwa kwe-birthmark zifumaneka zombini phantsi komyalelo kwaye zingenayo imithi. Sebenzisa ama-antihistamine ama-creams asebenzayo ekunciphiseni ubuzwe obunxulumene nezikhonkwane.
Emva kokuba kususwe i-mole, kuyimfuneko ukuba unyango ngendlela yokudumisa, kubonga ukuba ukusila kwenqenqweno kuyenziwa kwindawo yesalathisi esisusiweyo. Ngoncedo lwebrashi ekhethekileyo ejikelezayo, izicenga zomhlaba zisuswe ngelixa zinciphisa ukubonakala kweenkohlakalo ezinzulu.
Buza i-dermatologist malunga neenjini ezingakunceda ukunciphisa inqabileyo eseleyo emva kokususa isiza sokuzalwa. Ugqirha unokubonisa ukuba uqalise i-collagen okanye i-fat ephantsi kwesikhumba. Bona, ukuzalisa isikhumba, kwenza ukuba inqabana ingabonakali.
Enye indlela yokunciphisa ukusweleka kokutshatyalaliswa kwe-moles yonyango ngonyango lwe-laser. Izinketho ezininzi zokwenza unyango lwe-laser zifumaneka kubathengi, kubandakanywa nokusetyenziswa kweemitha ze-laser ezijoliswe kwimithambo yegazi ezisusa izikhonkwane ezicwangcisiweyo kwaye zigqithise iziqholo ezinobunzima. Ezinye iindlela zokonyango kweyeza laser ziquka ukusebenzisa i-laser ukutshabalalisa i-epidermis xa isalathisi sesikhumba esingaphantsi.
Zombini ezi nkqubo zikhuthaza ukukhula kwesikhumba esitsha kwaye zenzeke ukuba zingabonakali kakhulu emva kweenkqubo ezininzi.
Ukukhishwa kwesikhenkco sokushenxiswa kwe-laser yindlela ekhethekileyo yokutshatyalaliswa kwabangenayo. I-laser indlela ivumela izigulana ukuba zibuyele kwimisebenzi evamile ngokukhawuleza kunokuba emva kokungenelela okuqhelekileyo kokungenelela.
Kwiimeko ezinqabileyo, emva kokususwa kwebala lokuzalwa, kusekho inqabana, ekhutshiswayo. Buza udemokethi ukuba wenze isigqibo esifanelekileyo. Le ndlela ibandakanya ukuhlanganiswa kwesikhumba esitsha kwindawo echaphazelekayo. Iingcali zicebisa ukuba ziqwalasele olu khetho kuphela emva konyaka emva kokususwa kwegama lokuzalwa.
Naluphina uhlobo loqhiya emva kokususa i-birth mark ekhumbeni kunokubangela ukwazi nokwahlazo. Ukuqonda ukukhathazeka kwakho ngale meko, iingcali ze-cosmetology ziza kucoca ulusu lwakho kwaye lungabikho. Izicatshulwa ezisusiweyo zikunceda uzive ukhululekile kwaye uzikhangele.
Ukuqhawula izikrakra ezincinane emva kokususa i-moles isebenzise i-gel kontraktubeks. Isithako esisebenzayo kontraktubeks sisisombululo esiphumeleleyo ngenxa yokuba ukubunjwa kwalo kubandakanya ukulungiselela i-cepae, i-heparin kunye ne-allantoin. Sebenzisa i-gel kufuneka ivela kwinyanga ide ibonakale inqabana. Le ndlela yokonyango iya kufuna ukunyamezela kunye nomonde. I-Kontraktubeks inezixhobo ezichasayo ezinokutshabalalisa izicubu zesikhumba, ngaloo ndlela zivumela ukuba ziguqule.
Iingcebiso kunye nezilumkiso
Gcina ukhumbule ukuba xa ukujoba i-fat kunye ne-collagen, iziphumo zisesigxina, ngoko ke kuyimfuneko ukuphinda inkqubo ngokuphindaphindiweyo.
Ukongezelela, ezi nkqubo zonyango kunye nokuhlinzwa kungabiza kakhulu. Zikhethe iindlela ezongeziweyo zokonga ukujongana nezikrakra emva kokuba ususwe i-moles.
I-Cryolipolysis: intsingiselo yenkqubo, ukusebenza, ukuchasene
I-cream ye-tummy tuck kunye nokulahleka kwayo
Unokuthintela njani ukubonakala kwesikhumba saggy xa ulahlekelwa isisindo?
Iindawo zokungcebeleka ze-SPA ezilungileyo kwihlabathi
Kungenxa yintoni into enokuzikhupha okuphakamileyo?
Yintoni uMarilyn Monroe Syndrome
Ukupheka okulula kwi-salads kwitheyibhi yokutya
Ngaba ukukhupha isisu kuyingozi kwinyanga yesithathu yokukhulelwa?
Shish kebab kwijergranate ijusi
Indlela yokukhawuleza ukuphelisa intlungu ekhaya
Ukutyhefu nokutya kwabo
Isaladi kunye nesipinashi kunye neetamatisi ezinomdla
I-Cryosauna: inkolelo kunye namava abo okutyelela "i-friji"
Ukuziphepha kwisini, impembelelo yayo
Kwenzeka ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ukuba uyingxenye nomthandi wakhe?